Facebook Mail များMailထဲဝင်လာတာ မလိုအပ်ရင်
ပထမဦးဆုံး မိမိ facebook account ကိုဝင်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ ပုံထဲကအတိုင်း ၀င်ပြီးတာနဲ့ Group ဆိုတာကို ပုံထဲကအတိုင်း တွေ့အောင်ရှာပါ. ပြီးတာနဲ့ အောက်ကပုံထဲကအတိုင်း Leave Group ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ. ပုံကိုသိပ်မမြင်ရရင် ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ ပုံကြီးထွက်လာပါလိမ့်မယ်.
ပြီးတာနဲ့ အောက်ကပုံအတိုင်း ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် .
အဲ့ပုံမှာလဲ Leave Group ကို ထပ်ပြီးတော့ နှိပ်ပေးလိုက်ပါ.
အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ Account Settings ကိုသွားပါ။ ပြီးတာနဲ့ ဘယ်ဖက်အခြမ်းက Notifications ဆိုတဲ့ စာသားကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ Recent Notifications ဆိုတဲ့ အောက်မှာ အောက်ကပြထား တဲ့အတိုင်း စာအိတ်ပုံစံလေးတွေ မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်. ကိုမလိုတဲ့ အကောင့်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ စာအိတ်အားလုံးကို နှိပ်လိုက်ပါ မှိန်သွားပါလိမ့်မယ်. ဘာစာမှကို မရောက်ချင်တာဆိုရင်တော့ ရှိသမျှစာအိတ် အားလုံးကို မှိန်သွားအောင် တစ်နည်းအားဖြင့် Disable ဖြစ်သွားအောင် လို့ နှိပ်ပေးလိုက်ပါ. ဒါဆိုရင် မေးလ်ထဲကို ဘယ် facebook mail မှ ၀င်လာတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး.
ကဲအားလုံးပဲ မလိုအပ်ပဲ ရောက်လာတဲ့ မေးလ်များကို ဖျက်ရခြင်းဒုက္ခမှ ကင်းဝေးသွားလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်. အဆင်ပြေပါစေဗျာ.
ကိုညီနေမင်း ဆီမှပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါသည်။ ကျွန်တော်လဲFace Book ကိုသိပ်မသုံးတက်ပါဘူး